I-ALBHAMU YOKUQALA YERAINCOATS YI-DIY YOXWEBHU OLUDALA - IINDABA
Uluhlu Kunye Nezikhokelo
I-albhamu yokuqala yeRaincoats yi-DIY yoXwebhu oluDala
Oku kucatshulwe ku entsha 33 1/3 incwadi kwi-feminist punk band ye-1979 ye-LP eneenkcukacha zokuphila ngendlela ehlala abantu abaxakekileyo ekhokelele ekudalweni kwayo.
byUJenn PellyIgalelo lomhleli
NgoSeptemba 26 2017
Vula idrowa yesabelo
T unxiba iingubo zemvula sisiqalo, kodwa ikwayirekhodi malunga nesiqalo. Kwiingoma zayo uva ibali lenkcubeko. IiRaincoats yayiliqela labasetyhini, ngokuyinxenye, ababefunda nje ukudlala izixhobo zabo, kodwa icwecwe labo lokuqala liyahambelana nokuqala kobugcisa, obungenaloyiko nokwazi amateurism. Ezi ngoma zigqunyiweyo zihlawuliswa ngemvakalelo yokuza okutsha ngokuqonda ukuba awuyiyo le nto ubuyilindele. Sisandi sokufumana izinto ezingcwatywe ngaphakathi kuwe obungazi ukuba zikho. Sisandi sokwenyani sokwandisa inqaku ngenqaku, lokwamkela ipunk's dare. Sisandi sabantu abakholelwa kwiziqu zabo.
I-blarf iyeke kwaye iyeke
Abalinganiswa bealbham, ekwangababhali bayo, zii-maverick zabasetyhini abancinci bodwa esixekweni. Bazula iimayile ezininzi ezitratweni zekhonkrithi kwaye ngakumbi kubodwa beengqondo zabo. Ukuqhekeka kobomi kuyangqubeka kwaye kudilike kunye. Bajonge kumaqonga eetyhubhu kwaye baphupha. Ngomoya wayo oneentloni, Iingubo zemvula i-introversion as punk-umbhiyozo wobomi bangaphakathi babasetyhini. Kungenxa yeso sizathu le nto imizuzu engama-34 yobugcisa bobugcisa bangaphandle baba ngumculo wokomoya kwizizukulwana ezininzi zabafazi, kunye nonyango lwabantwana abathe cwaka, abagxothiweyo, ii-odes kubantu bangaphandle phakathi kwabangaphandle ngonaphakade. Iyona albhamu yokugqibela.
UVirginia Woolf wakhe wathi abafazi bafuna imali kunye namagumbi abo ukuze benze imisebenzi yengqondo. Ngo-1979, iiRaincoats zazingenayo imali, kodwa zafumana igumbi lazo elikwimo yabantu abahlala eLondon. Ukulungiswa ngokupheleleyo, phantsi kwendlela yokufa, yayiyindawo yokuziqhelanisa ecekeceke incinci kwaye icinezelwe kwaye ingwevu kangangokuba umntu kwafuneka ahlale kwindlu yangasese etyalwe embindini womgangatho ukuze wonke umntu alingane. Umatrasi ulele eludongeni ukunceda ukufihla ukubethelwa okungapheliyo malunga, irakethi ekufutshane rhoqo. Umlingo unendlela yawo yokuqaqamba usuka kwiscalor semida. Kula magumbi amabi, iiRaincoats zemba ubuhle ngaphakathi, zabhala i-albhamu yokuqala eye yakudala.
Ngo-1979, iiRaincoats azizange zisebenze eminye imisebenzi. Amalungu amathathu kwamane ahlala kwiskwati kwaye ke akahlawulanga rhafu. Sasihlala kumoya omtsha, i-bassist kunye negama lomculo uGina Birch wakha wandixelela. Ikhaya lalingenabutofotofo, ke abahlali bahlala ixesha elininzi kwii-squat cafés nakumagumbi eti (iihangovers ngexesha lamahippie) apho wawunokuthenga irayisi emdaka, imifuno, kunye nesarsaparilla ngeepeni ezimbalwa; kwiivenkile zokunceda, unokufumana ikhabethe elitsha. Unganxiba phantse ungenamali, utsho uGina. Ungatya ngexabiso eliphantsi okanye ungatyi kwaphela. Banokukwazi ukuzinikezela kubugcisa. Ubume be-quasi-esemthethweni bokuhlalisa abantu banike iiparameter zobomi babo-kwaye kunjalo Iingubo zemvula -Umda wendalo ophefumlelweyo. Yayisisandi sasekhaya, esasisiphithiphithi, utsho uGina. Indlela esasihlala ngayo Iingubo zemvula yi-ngendlela yayo-umculo we, kunye, kunye nemida. I-Vocalist kunye no-guitarist u-Ana da Silva uxelele enye zine, Siyi-punks yexesha elipheleleyo.
Imbali yokuqhekeza eLondon ibuyela emva ngo-1968, nangona yaqala ngemisebenzi ecwangcisiweyo ngakumbi kwiintsapho. Iintshukumo ezifanayo zenzeka ngaxeshanye kulo lonke elaseYurophu: eAmsterdam naseCopenhagen, abahlali babeququzelelwe ngokumangalisayo, ngelixa ukuhlala e-fascist e-Italiya kwakune-ajenda yezopolitiko. Kodwa ukusasazeka kwasasazeka ngokukhawuleza eBritane kuba, ngophando olwenziwe ngo-1979, iimeko ezizala ukuhluthwa ziyandiswa. Ngo-1972, ubume be-UK squatting base buqalisile ukubonakalisa ukungahambelani koluntu, baba yinto encinci, yokuzikhethela, kunye nokulandela okungagunyaziswanga. Phakathi kowe-1972 nowe-1975, inani labemi elihluthwayo lenyuka lisuka kwi-1,500 laya kuma-25,000, kwaye ukuphela kuka-1979 babengama-30,000 abahlali baseLondon kuphela. Uninzi lwabantu (iiRaincoats zibandakanyiwe) zifumene squats ngendlela yejelo lolwazi lomlomo elisebenzayo.
UAna da Silva malunga no-1978. Ifoto nguShirley O'Loughlin.
Ukuba izindlu lilungelo lomntu, oko kukuthi, ukuhluthwa kwezopolitiko ngokuqinisekileyo, kukongezwa kwendalo kwe-punk, ngokwazo isenzo sefilosofi. Okona kungcono, ipunk yindawo apho abantu bacinezelekileyo okanye abatyesheleyo bathabathe oko kufanelekileyo. Benza njengoko behamba. Benza ngaphandle kwemvume. ELondon, ngowe-1979, kwabakho ingxaki enkulu yezindlu; Imimandla yonke yahlala ingenamntu, malunga neendawo zokuhlala eziyi-150,000 ezishiywe zingenanto ngenxa yezikimu zophuhliso olukhulu kunye nohlahlo-lwabiwo mali olulahlekileyo. Ngeli xesha i-190,000 yeentsapho ezingenamakhaya zazikho kuluhlu lokulinda lwebhunga lezindlu. Njenge-punk-ubugcisa ngaphandle kwemvume-ukuqhekeza yayiyindlela ethe ngqo yokuphendula ukusilela kwamaziko.
Izakhiwo ezihluthwayo ziya kushiywa zize zingabi namntu, ekulungisweni kakubi ngenxa yokungahoywa okanye ukonakaliswa. Mhlawumbi kuzakubakho umlilo endlwini kungabikho mntu ukhathazayo ngokuwulungisa; okanye umntu uphume washiya ibhoyila yaphukile. Urhulumente uqukumbele ngelithi akukho ngqiqweni kwezemali ukubuyisela ezi ndawo zonakeleyo kwaye uzakubhengeza ukuba azinakuhlalwa; Okwangoku, abaxuthi baya kuzilungisa ngexabiso eliphantsi ngokusebenzisa intelekelelo, abasebenzi bokuzithandela, intsebenziswano, izinto ezisetyenziswayo, izinto ezintsha kunye nokuzimisela.
Isifundo ngo-Disemba 1979 se-Intraurban Squatting eLondon sifundeka ngolu hlobo:
Isenzo sokuqhekeza sihlala sithatha uhlobo lokungena ngokufihlakeleyo ebusuku. Umsebenzi wasemini ufezekiswa ngcono ngabahlali abazenza abasebenzi okanye njengabameli bezomthetho ... Ngokungenakuphikiswa iye yamkelwa ngokubanzi ngabasemagunyeni njengenye indlela yokuqeshisa abanokukwazi 'ukubuyisela nokuphucula izindlu ... ngexabiso eliphantsi kakhulu kwaye ngokukhawuleza kunamabhunga '... ukuhluthwa kuthathwa ngokuba kukusetyenziswa okunengqiqo noqoqosho kakhulu kwezakhiwo ezingasetyenziswanga ezidolophini.
IiRaincoats kwiHolo yeAcklam yaseLondon ngo-1979. Ifoto nguShirley O'Loughlin.
Ininzi yeNdlela yaseMonmouth, apho wayehlala khona uGina, yaqhushumba; I-stucco yayiwa ezindlwini. Abanye banokuthi le bendifudukele kuyo ibingahlali, utshilo uGina, kodwa sayifumana ilungile.
Iingubo zemvula , ngandlela thile, yimveliso eyahlukileyo yenkcubeko ye-squat. Uxwebhu lweziphi i-squats ezivunyelwe njengeendawo zasimahla, apho umbhali we-anarchist uHakim Bey wayekhe waqulunqa imimandla yexeshana ezimeleyo. IiRaincoats zaziphikisana nobuhle, kodwa umculo wazo wawungekho ngaphandle, kwaye inkululeko yokuqhekeka yabenza ukuba bachithe besaphila kakhulu kwaye bahlala ixesha elide beziqhelanisa kunye befunda kwaye bezolula kwaye befumanisa (kunqabile ukuba bazenze bodwa). Isandi sabo esasisemgangathweni sachongwa ngononophelo kunye noko babenako: ixesha lokusebenza, kunye nendawo yokwenza. Kwahlala-ngaphakathi. Baye baba ngabadlali abomeleleyo.
I-Violinist kunye nelizwi uVicki Aspinall's Brixton squat yayiphawuleka kakhulu, yathathwa ezinzulwini zobusuku kumqolo wamakhaya aqhekekileyo. Awunakuxelela mntu ukuba ukhona kuba siyigcinile yenyuka, utshilo. Imitha yombane ibaleke kumzi-mveliso ongaphaya kwesitalato. Kwakukho indlu yangasese egadini, kodwa kwakungekho ndawo yokuhlambela, ngoko basebenzisa indawo yokuhlambela kawonke-wonke. Uya kulala ebhafini kwaye kubekho umntu ebhafini ecaleni kwakho, kwenye ikubhite, utsho uVicki. Khange ibonakale ngathi iyakhathazeka kodwa.
I-albhamu entsha ye-buju banton
I-squat kaGina yayiyindlu enezidima kodwa esezulwini enemigangatho emithathu e-31 Monmouth Road, i-cul-de-sac eBayswater; wayehlala kumagumbi amabini kumgangatho ophezulu. Udaka lwaluphuma ezindongeni, kwaye kwimizamo yokuluqhekeza, wazogquma iindonga ngepeyinti emnyama, emfusa-mnyama wayixuba esikolweni kwaye wayiphatha ekhaya ngeebhokisi zeebisi. Kwiivenkile zesisa, wathenga iincindi zemichiza eyahlulayo kunye ne-puzzle-wayihlanganisa kunye emhlabeni. Kwakukho amanzi abandayo kuphela. Kwakukho amakhowa akhula ngaphandle kodonga kwigumbi lokuhlambela.
I-Fairytale kwi-Supermarket, i-track ye-Raincoats yokuqala, ibhiyozela obu bumnandi bobomi, obenze ukuba konke kwenzeke. Ngomfanekiso wepati olayishiwe ka-Ana, ingoma ngehlazo ivusa umngxunya we-surreal yomvundla kwi-Alice kwiWonderland: Iikomityi zeti ziwotshi / iwotshi! Ikloko Ikloko Kodwa lo mgca wawukhutshwe ngokwenyani. Kwindawo awayehlala kuyo, uGina wafumana indlela engalindelekanga yokuxela ixesha: Njenge sundial, wayesazi ukuba iqabane lakhe uSimon ebekhona ekhaya kuba iketile izakufudumala.
Kulapho kwigumbi elingaphantsi komgangatho ewohlokayo e-Monmouth Road apho iiRaincoats zaziqhelisela. Baye babelana ngendawo yokuziqhelanisa neVincent Units, iqela lomlingane kaGina uNeal Brown, umntu ofunda naye owayezuze eli squat kwi French anarchist. Apha ngezantsi kweGina bekukho abahlali ababini abavela eThailand ogama linguWiwat noPom. Ivumba elinamandla leoyile etshisiweyo kunye neziqholo zihlala zihlala zikhona. Ngamanye amaxesha uGina wayezama ukusebenzisa ibhafu: Ndingafumana igumbi lokuhlambela liguqulwe laba yindawo yokungcakaza enetafile ezincinci zamakhadi kunye namanani amaninzi ajikeleze kunye nebhotile yebourbon phakathi kwabantu ababini, bedlala ngomsindo. Yonke into eyenzekileyo yile kanye yenzekileyo, akukho zikhalazo. Sonke nje samkelana kunye nendlela esasihlala ngayo.
Ngokwenyani, ubomi babusimahla, babenza ubugcisa babo. Kodwa kusoloko kukho iindleko ezithile. Njenge squatter, awuzange wazi ukuba uyakugxothwa, ke iziseko zobomi zazizezikhonkwane-zidityanisiwe, iziqwenga eziphathwayo-iijenreyitha zombane, izitovu zeparafini, izibane zeoyile. Kumgangatho wakhe wokulala, uGina wayenokupheka ngegesi okuncinci. Ndathenga umatshini werabha, kwaye kwabakho ukuvuza okuncinanana kwegesi, kwaye nganye nganye, amagqabi onke awa, ‘de ndashiywa ngenduku nje emide ekhombe. Andiqondi ukuba ndandiphilile.
Ngandlela thile, ndandingenangqondo malunga nendlela ilizwe elisebenza ngayo. Konke bekufumana izithuba ezincinci, kunye nokuntywila kunye nokuntywila kwizithuba ebezivulekile kum. Ke usebenza kwiipaseji zakho ezincinci, iitonela zakho. Uhamba kule ndawo kwaye ngamanye amaxesha iingcango ezimbini zivulekile kwaye unokukhetha omnye endaweni yomnye ...
Bendingazi ukuba ndenzeni, ngokusisiseko. Bendingazi ukuba mandiphile kanjani, kwaye akukho namnye okufundisayo. Akukho namnye owathi kum: ‘Nantsi into omele uyenze.’ Ke ndiyenzile nje xa ndihamba, ndihamba ndikhubeka. Kwaye ndenza iimpazamo. Andizange ndiyazi into endiyenzayo. Bendikwi squat yam ndingenanto. Kwakungathi ndisendle.
UGina Birch malunga no-1979. Ifoto nguShirley O'Loughlin.
Ubomi sisenzo sokuphuculwa. Yindlela enamajiko-jiko engenayo imephu, uthotho lwemibuzo efuna iimpendulo. Mhlawumbi asikaze siyifumane ngokupheleleyo, kodwa siyaphendula kwaye sifunde umzuzu ukuya kumzuzu. Ezi nyaniso ziphefumla kwimizuzwana yokuqala yeFairytale kwiSuphamakethi. UAna ubhengeza, Akukho mntu ufundisa indlela yokuphila! kwaye igxininisa inyani elula yokuba ngumntu, kodwa kwakhona, ngobabalo kunye nobukrelekrele, eyona nto iphambili kwinkcubeko ye-DIY. Le punk aphorism iyaphila kwisandi se Iingubo zemvula ukusuka kwiFairytale ukuya phambili; akukho ncwadi yemithetho inokutshiswa xa incwadi yomthetho ingaze ingene kwisakhelo. Akukho mntu ukufundisa indlela yokuphila ebonisa ukuba ezona zifundo zinzulu zezi uzifundisayo, amachaphaza adibanisa ukuba kungaphakathi kuphela, kwihlabathi lokuqonda olwenzileyo ngaphandle kwento.
Uvavanyo lweMathematika yokuDilonga
Microsoft Azure Fundamentals (Az-900) uVavanyo lwaPhambili lweMviwo
IQhawe lam leZifundo zeMfundo eQuirk Generator: Yintoni iMha Quirk yakho?
Yintoni elungileyo kule Veki: Iingoma ezi-100 eziBalaseleyo zeQ1 2018
Iingoma zikaBobby Bare uShel Silverstein Plus
Imibuzo yeeHomophones kwiBanga lesi-6
Ndisamkhumbula uTheresa Benoit
Inkqubo yestereo enesidlali sokurekhoda
ti vs lil wayne
j cole iingoma ezintsha
Mormor izulu kuphela unqwenela
indlela yendoda kunye redman
Ilizwi Elithembekileyo Kumculo.
Copyright © All rights reserved | gov-civil-beja.pt | Umthetho Wabucala